Shiinaha LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel Display Android 8.0 3 + 32G soosaarayaasha iyo alaableyda | Lindian
Noo soo dir email faahfaahinta
Guangzhou Lindian Intelligent Technology Co., Ltd waa soo saare xirfadle u heellan cilmi baarista, horumarinta, naqshadeynta, wax soo saarka, iibinta iyo adeegga sabuuradda is dhexgalka, sabuuradda caqliga badan, kiniin caqli badan oo is dhexgal ah, badeecada isdhexgalka aadanaha iyo kombiyuutarka iyo xalalka, oo si ballaaran loogu adeegsado waxbarashada, waxbarista , kulanka shirkadaha, bandhig ganacsi iyo aaga dadweynaha.
Iyada oo leh qalab heer sare ah, tiknoolajiyad sare & cusub oo leh xarun teknoolojiyad sare ee R&D, oo ay ku jiraan 30 injineerro iyo farsamo yaqaanno, Si aan u siino alaabada iyo adeegyada ugu fiican, waxaan dhignay nidaam casri ah oo lagu maareeyo tayada kaasoo si adag u waafaqsan heerarka caalamiga ah. CE, CCC, ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001 ROHS ayaa caddeynaysa.
Wax soo saarkayagu waa kuwo caan ku ah Yurub, Ameerika, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe iyo Afrika iwm. Waxaan sidoo kale sii wadnaa baaritaanka iyo horumarinta alaabteena cusub si aan u qancino dalabyada cusub ee macaamiisha. Tayo sare, qiimo macquul ah iyo adeegyo wanaagsan had iyo jeer waa balan qaadkeena dhamaan macaamiisheena
Shaashadeena mucjisada ah ee abaalmarinta badan waxay la yimaadaan dammaanadda ugu ballaaran iyo heerka ugu hooseeya ee suuqa. Ka dooro shan cabbir oo kaladuwan oo udhaxeysa 55 ilaa 98 inji oo leh booska ikhtiyaariga ah ee kumbuyuutarka iyo isdhexgalkayaga gaarka ah ee loogu talagalay muraayadaha waaweyn. Dhamaan shaashadeena xallinta ee 4K waxay la yimaadaan muuqaalo
Kooxdayada khabiirada maxalliga ah waxay ku siin karaan adeegga socdaalka iyo taageerada noloshaada Lindian oo dhan
Iyada oo tayo sare leh iyo dayactir hooseeya, Lindian waa mid ka mid ah bandhigyada is-dhexgalka ee ugu horumarsan suuqa.
Shirka sabuuradda isdhexgalka ayaa bedelaya howlahaaga ganacsi si aad ugu suurtageliso isgaarsiinta xooggan, isku xirnaanta iyo iskaashiga adoo adeegsanaya teknolojiyad wada-shaqeyn.
Maaddaama baahida loo sii kordhayo goobo wax wada barasho oo dheeri ah, ayaa sidaas oo kale dalabka tikniyoolajiyadda ee fasalku u kordhayaa. Lindian waxay kuqanacsan tahay barashada dhex dhexaadinta jawi fasallo dhijitaal ah.
Taabashadeenna badan ee abaalmarinta badan ee guuleysta ayaa dib u qeexeysa mustaqbalka fasalka
Taabashadan is-dhexgalka leh ee aadka u xasaasiga ahi waxay ku faantaa xallinta 4K, 30-dhibic taabasho, waqti jawaab degdeg ah, jarista amniga iyo qaababka maareynta, iyaga oo ka dhigaya kuwo ku habboon ururada u baahan inay bixiyaan xalka ku socon doona ama ka baxsan shabakadda. Soo gal kootooyinkaaga Cloud iyo dejinta adoo isticmaalaya nidaamkayaga macluumaadka.
Loo dhisay si ay u sii socoto, shaashadaha oo dhan waxay la yimaadaan dammaanad soo saare oo dhameystiran.
Maaddaama isticmaalka tikniyoolajiyada waxbarashadu ay kor u kacayso, ayaa sidoo kale waxay kordheysaa tirada shaqada looga baahan yahay in lagu maareeyo cusbooneysiinta, casriyeynta iyo bixinta taageerada isticmaalaha. Tani waa tixgelinta ugu weyn ee IT-ga iyo maareeyayaasha nidaamka markay dib u eegis ku sameynayaan tikniyoolajiyadda dugsiga ee AV. Kaliya maahan Clevertouch inuu ubaahdo ujeedooyinka waxbarashada, iyadoo la hagaajinayo daryeelka macallimiinta, waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwa si fudud loo maareeyo.
Hore: LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel Display Android 8.0 2 + 16G
Xiga: LYNDIAN T Series Interactive Flat Panel Display Android 6.0 1 + 8G
75 Is-dhexgalka Is-dhexgalka Is-dhexgalka
Is-dhexgalka Flat Panel Display
Isdhaxgalka Flat Panel Display
Soo Bandhigida Isdhaafsiga Flat Panel
Bandhigga Smart Interactive Flat Panel Disorder
LYNDIAN MT Taxanaha Isdhexgalka Flat Panel Displa ...
75 Is-dhexgalka Is-dhexgalka Is-dhexgalka, Dhammaan Hal Fagaare Is-dhexgal ah, Bandhigga Smart Interactive Flat Panel Disorder, Isdhaxgalka Flat Panel Display, Taabo Muuqaalka Iskuduwaha Isgaadhsiinta, Is-dhex galka Whiteboard Interactive,